Bunjani Ubuhlobo Bakho NoNkulunkulu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Noma nini lapho wenza noma yini, kumele uhlole ukuthi zilungile yini izisusa zakho. Uma ukwazi ukwenza ngokuhambisana nezimfuno zikaNkulunkulu, kusho ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile. Lesi isikali okuqalwa kuso. Uma, ngesikhathi uhlola okukugqugquzelayo kwakho, kuba nalokho okungalungile, futhi uma ungakwazi ukuzifulathela wenze okuhambisana namazwi kaNkulunkulu, kusho ukuthi uyoba umuntu olungile phambi kukaNkulunkulu, okuyoveza ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile, nokuthi konke okwenzayo kungenxa kaNkulunkulu, hhayi ngenxa yakho. Noma nini lapho wenza noma usho okuthile, kumele ulungise inhliziyo yakho, ube olungile, ungaholwa yimizwa yakho, noma wenze intando yakho. Lena imiyalo amakholwa kaNkulunkulu aziphatha ngayo. Izisusa nesiqu somuntu kungembuleka entweni encane, ngakho ukuze abantu bangene endleleni yokwenziwa baphelele kuNkulunkulu, kumele baqale balungise izisusa zabo nobuhlobo babo noNkulunkulu. Kulapho kuphela ubuhlobo bakho noNkulunkulu buvamile, lapho uyokwazi khona ukupheleliswa uNkulunkulu, kulapho kuphela lapho ukusebenza kukaNkulunkulu, ukukuhlanza, ukukuyala, nokukucwenga kuyokwazi khona ukufinyelela umphumela ofunekayo. Lokho kusho ukuthi, abantu bayakwazi ukuba noNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, bangafuni izinzuzo zabo, bangacabangi ngekusasa labo (okubhekisela ekucabangeni kwenyama), kodwa kunalokho bathwala umthwalo wokungena ekuphileni, benza okusemandleni ukufuna iqiniso, bazithobe emsebenzini kaNkulunkulu. Ngale ndlela, izinhloso ozifunayo zilungile, futhi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile. Kungashiwo ukuthi ukulungisa ubuhlobo bomuntu noNkulunkulu kuyigxathu lokuqala ekungeneni ohambweni lomuntu lomoya. Nakuba ikusasa lomuntu lisezandleni zikaNkulunkulu, futhi like lashiwo uNkulunkulu, bengeke bazishintshele bona, ukuthi ungapheleliswa yini uNkulunkulu noma uzuzwe uNkulunkulu kuncike ekutheni bujwayelekile yini ubuhlobo bakho noNkulunkulu. Mhlawumbe kunezingxenye zakho ezibuthakathaka noma ezingalaleli—kodwa uma nje umbono wakho ulungile futhi izisusa zakho zilungile, uma nje ubulungisile ubuhlobo bakho noNkulunkulu wabenza baba obujwayelekile, uyoba ngofanele ukupheleliswa uNkulunkulu. Uma ungenabo ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, wenza ngenxa yenyama, noma yomndeni wakho, khona-ke akunandaba ukuthi usebenza kanzima kangakanani kodwa kuyoba yize. Uma ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile, yonke into iyohlangana. UNkulunkulu akabheki okunye, kodwa ubheka kuphela ukuthi imibono yakho ekukholelweni kuNkulunkulu ilungile yini: ubani okholelwa kuye, ukholwa ngenxa kabani, nokuthi kungani ukholwa. Uma ukwazi ukuzibona kahle lezi zinto, futhi ukwazi ukulungisa imibono yakho kanye nezenzo, ukuphila kwakho kuyokwenza intuthuko, uyaqiniseka ngokwenziwa ungene emgudwini ofanele. Uma ubuhlobo bakho noNkulunkulu bungajwayelekile, nemibono yakho ekukholelweni kuNkulunkulu kungamukeleki, lokhu kuyonqanda konke okunye. Akunandaba ukuthi ukholelwa kanjani kuNkulunkulu, ngeke uzuze lutho. Uma ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile uNkulunkulu uyokwamukela lapho kuphela, lapho ufulathela inyama, uthandaza, uhlupheka, ubekezela, ulalela, usiza abafowethu nodadewethu, unikela ngeminye imizamo kuNkulunkulu, njalo njalo. Ukuthi into oyenzayo ibalulekile noma cha kuncike ekutheni izinhloso zakho zilungile yini nasekutheni imibono yakho ilungile yini. Ezinsukwini zanamuhla, ukukholelwa kwabantu abaningi kuNkulunkulu kufana nokubuka iwashi amakhanda abo ebheke eceleni—imibono yabo ayamukeleki. Yonke into izolunga uma kungahlaziywa lapha, yonke into izolunga uma kungaxazululwa lokhu, futhi yonke into izoshabalala uma lokhu kungalungiswa. Abanye abantu baziphatha kahle phambi Kwami, kodwa lapho abakwenzayo nje esithe ukungiphika. Lezi izindlela eziwubugebengu futhi ezikhohlisayo futhi lolu hlobo lomuntu luyinceku kaSathane, bawumfanekiso kaSathane ukuze bavivinye uNkulunkulu. Uwumuntu olungile kuphela uma ukwazi ukuzithoba emsebenzini Wami nasemazwini Ami. Uma nje usakwazi ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, uma nje konke okwenzayo kuletheka phambi kukaNkulunkulu, konke okwenzayo kunobulungiswa nokuhlonipheka, uma nje ungenzi izinto eziyihlazo, ungenzi izinto eziyolimaza ukuphila kwabantu, uma nje usaphila ekukhanyeni, ungonakalisiwe uSathane, khona-ke ubuhlobo bakho noNkulunkulu buyolungiswa.
Ekukholelweni kuNkulunkulu, izinhloso zakho nemibono kumele kulungiswe; kumele ube nokuqonda okuhle futhi uwaphathe kahle amazwi kaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu, izimo ezihlelwe uNkulunkulu, umuntu ofakazelwe uNkulunkulu, nangoNkulunkulu ongokoqobo. Akumele wenze ngokuhambisana nemicabango yakho, noma wenze amacebo akho amancane. Kumele ukwazi ukufuna iqiniso kuyo yonke into futhi ume endaweni yakho njengendalo kaNkulunkulu uzithobe kuwo wonke umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ufuna ukulwela ukupheleliswa uNkulunkulu, ungene emgudwini ofanele wokuphila, khona-ke inhliziyo yakho kumele ihlale iphila phambi kukaNkulunkulu, ingangcoli, ingamlandeli uSathane, ingamshiyi uSathane nanoma yimaphi amathuba okwenza umsebenzi wakhe, futhi ungamvumeli uSathane akusebenzise. Kumele uzinikele ngokugcwele kuNkulunkulu futhi wenze uNkulunkulu akubuse.
Ingabe uzimiselel ukuba inceku kaSathane? Ingabe uzimisele ukuphanjwa uSathane? Ingabe uyakholelwa kuNkulunkulu futhi ufune uNkulunkulu ukuze upheleliswe Nguye, noma ingabe wenzela ukululaza umsebenzi kaNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukuzuzwa uNkulunkulu futhi uphile ukuphila okunenjongo, noma ingabe uzimisele ukuphila impilo engelutho neyize? Ingabe uzimisele ukusetshenziswa uNkulunkulu, noma ukuphanjwa uSathane? Ingabe uzimisele ukuvumela amazwi kaNkulunkulu neqiniso kugcwale kuwe, noma uvumele isono noSathane kugcwale kuwe? Cabanga futhi ukuhlaziye lokhu. Ekuphileni kwakho kwamihla yonke, kumele uwabambe lawo mazwi owashoyo nalezo zinto ozenzayo eziyokwenza ubuhlobo bakho noNkulunkulu bube obungajwayelekile, bese uzilungisa ukuze ungene endleleni efanele. Hlola amazwi akho, izenzo zakho, konke ukunyakaza kwakho, imicabango nemibono yakho ngazo zonke izikhathi. Bamba isimo sakho sangempela bese ungena endleleni yomsebenzi woMoya Ongcwele. Ungaba nobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu ngale ndlela kuphela. Ngokukala ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile yini, uyokwazi ukulungisa izinhloso zakho, uqonde isiqu somuntu, uziqonde nawe; ngalokhu, uyokwazi ukungena ezimweni ezingokoqobo, uzishiye ngobuqotho, ufinyelele ukuzithoba kwangempela. Ezindabeni ezinjalo njengalapho ubona ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile, uyokwazi ukuthola amathuba okupheleliswa uNkulunkulu, uyokwazi ukuqonda izimo eziningi uMoya Ongcwele osebenza kuzo, futhi uyokwazi ukubona ngale kwamacebo amaningi namatulo kaSathane. UNkulunkulu angakuphelelisa ngale ndlela kuphela. Ulungisa ubuhlobo bakho noNkulunkulu ukuze uzithobe kuwo wonke amalungiselelo kaNkulunkulu. Kukanjalo ukuze ungene ngokujulile ezimweni ezingokoqobo, futhi uzuze omunye umsebenzi woMoya Ongcwele. Lapho wenza unobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu, izikhathi eziningi lokhu uyokuzuza ngokushiya inyama nangokubambisana kwakho kwangempela noNkulunkulu. Kufanele uqonde ukuthi “ngaphandle kwenhliziyo enobunye, kunzima ukwamukela umsebenzi kaNkulunkulu; uma inyama ingahlushwa ubunzima, azikho izibusiso ezivela kuNkulunkulu; uma umoya ungahlupheki, uSathane ngeke ahlazeke.” Uma wenza futhi uyiqonda kahle le miyalo, imibono yakho ekukholelweni kuNkulunkulu iyoba elungile. Ezintweni enizenza njengamanje, kumele nishiye umbono “wokufuna isinkwa esizonisuthisa,” kumele nishiye umbono “wokuthi yonke into yenziwe uMoya Ongcwele futhi abantu abakwazi ukusiza.” Abantu abakhuluma ngale ndlela bayacabanga, “Abantu bangenza noma yini abafuna ukuyenza, futhi lapho kufika isikhathi uMoya Ongcwele uzosebenza futhi ngeke sisaba khona isidingo sokuthi abantu banqobe inyama, ngeke basadinga ukubambisana, bayodinga ukuthi uMoya Ongcwele kuphela ubakhuthaze.” Yonke le mibono iwumbhedo. Ngaphansi kwale zimo, uMoya Ongcwele awukwazi ukusebenza. Yilolu hlobo lombono oluphenduka isithikamezo esikhulu emsebenzi woMoya Ongcwele. Izikhathi eziningi, umsebenzi woMoya Ongcwele uzuzwa ngokubambisana kwabantu. Ngaphandle kokubambisana nesinqumo, bese kuba ukufuna ukushintsha isimo somunye, zuza umsebenzi woMoya Ongcwele, uthole nokukhanyiselwa kanye nokukhanya okuvela kuNkulunkulu konke kuyimicabango eyihaba; lokhu kubizwa “ngokugaxela kumuntu uthethelele uSathane.” Abantu abanjena abanabo ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu. Uthole izinto eziningi zikaSathane kuwe, nasezenzweni zakho ezindala, ziningi izinto esezishayisane nezimfuno zikaNkulunkulu zamanje. Ingabe uyakwazi ukuzishiya njengamanje? Thola ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu, yenza ngokuhambisana nezinhloso zikaNkulunkulu, yiba umuntu omusha ube nokuphila okusha, ungabheki emuva eziphambekweni ezidlulile, ungazisoli ngokwedlulele, kufanele ukwazi ukusukuma ubambisane noNkulunkulu, ufeze imisebenzi okufanele uyenze. Ngale ndlela, ubuhlobo bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile.
Uma umane wamukele la mazwi ngomlomo ngemva kokuwafunda kodwa engayanga enhliziyweni yakho, futhi ukuthatha kancane ukuba nobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu, khona-ke kufakazela ukuthi awububheki njengobubalulekile ubuhlobo bakho noNkulunkulu, imibono yakho ayikaqondiswa okwamanje, izinhloso zakho azikaqondiswa ukuvumela uNkulunkulu akuzuze, nokunika uNkulunkulu inkazimulo, kunalokho zilawulwa ukuvumela amacebo kaSathane ukuba aphikise nangokuzuza imigomo yakho. Lolu hlobo lwabantu lonke lunezinhloso ezingalungile kanye nemibono. Ngaphandle kwalokho uNkulunkulu akushilo noma kwendlela okushiwo ngayo, abanamehluko futhi alukho ushintsho olungabonakala. Izinhliziyo zabo azesabi nhlobo futhi abanamahloni. Lolu hlobo lomuntu luwumuntu odidekile ongenamoya. Ngoba wonke amazwi kaNkulunkulu, ngemva kokuwafunda futhi wawaqonda, kufanele uwenze. Ngaphandle kwendlela owawujwayele ukuwenza ngayo—mhlawumbe phambilini inyama yakho yayibuthakathaka, wawudlubulunda, futhi wawuphikisa—lena akuyona into enkulu, futhi akukwazi ukuphazamisa ukuphila kwakho kungakhuli kusukela namhlanje. Uma nje usakwazi ukuba nobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu namuhla, lisekhona ithemba. Uma ngaso sonke isikhathi ofunda ngaso amazwi kaNkulunkulu, unezinto ezishintshile futhi uvumele abanye abantu babone ukuthi ukuphila kwakho kushintshile kwaba ngcono, kunokubonisa ukuthi unobuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu nokuthi bulungile. Indlela uNkulunkulu aphatha ngayo abantu ayincikile eziphambekweni zabo. Uma nje ungakadlubulundi futhi ungaphindi uphikise ngemva kokuqonda nokubona, khona-ke uNkulunkulu usazoba nomusa kuwe. Lapho unalokhu kuqonda nesifiso sokulwela ukupheleliswa uNkulunkulu, khona-ke isimo sakho phambi kukaNkulunkulu siyoba esijwayelekile. Noma yini oyenzayo, cabanga: UNkulunkulu uzocabangani uma ngenza lokhu? Kuzobathinta kanjani abafowethu nodadewethu? Hlola izinhloso zakho emthandazweni, ezingxoxweni, ekukhulumeni, emsebenzini, nasekuxhumaneni nabantu, uhlole ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile noma cha. Uma ungakwazi ukuhlukanisa izinhloso nemicabango yakho, kusho ukuthi awukwazi ukuhlukanisa, okufakazela ukuthi kuncane kakhulu okwaziyo ngeqiniso. Yiba nombono ocacile ngakho konke uNkulunkulu akwenzayo, bona izinto ngokuhambisana nezwi likaNkulunkulu nezinto ngokuma ngasohlangothini lukaNkulunkulu. Ngale ndlela izinhloso zakho ziyoba ezilungile. Ngakho, ukwakha ubuhlobo obuhle noNkulunkulu kuyinto ehamba phambili kuwo wonke umuntu okholelwa kuNkulunkulu; wonke umuntu kufanele akubheke njengomsebenzi obaluleke kakhulu nanjengesehlakalo esikhulu kakhulu. Yonke into oyenzayo kufanele ikale ukuthi unabo yini noma cha ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu. Uma ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile nezinhloso zakho zilungile, kwenze. Ukuze uvikele ubuhlobo obujwayelekile noNkulunkulu, akufanele wesabe ukulahlekelwa izinto ozithandayo, akufanele uvumele uSathane alwe nawe, akufanele uvumele uSathane abe nentuba kuwe, futhi akufanele uvumele uSathane akwenze inhlekisa. Inhloso enjalo iveza ukuthi ubuhlobo bakho noNkulunkulu bujwayelekile. Akuyona eyenyama, kunalokho ngeyengxenye yomoya, ngeyokuzuza umsebenzi woMoya Ongcwele nokwanelisa intando kaNkulunkulu. Uma uzongena esimweni esifanele, kufanele wakhe ubuhlobo obuhle noNkulunkulu, kumele ulungise umbono wakho wokukholelwa kuNkulunkulu. Ngobokuvumela uNkulunkulu akuzuze, ukuvumela uNkulunkulu aveze izithelo zamazwi Akhe kuwe, futhi akukhanyisele ngisho nakakhulu. Ngale ndlela uyongena endleleni efanele. Yidla futhi uphuze njalo amazwi kaNkulunkulu amanje, ungene endleleni yamanje yomsebenzi kaMoya oNgcwele, yenza ngokuvumelana nezimfuno zamanje zikaNkulunkulu, ungalandeli imikhuba eyisidala, ungabambeleli ezindleleni ezindala zokwenza izinto, ungene ngokushesha endleleni yomsebenzi wanamuhla. Ngale ndlela ubuhlobo bakho noNkulunkulu buyoba obujwayelekile ngokugcwele futhi uyongena emgudwini ofanele wokukholelwa kuNkulunkulu.
UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe I UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizie VII